Mitadiava sarontava volo 6 amin'ity lohataona ity | Bezzia
Susana Garcia | 29/04/2021 20:00 | beauty, Fitsaboana hatsaran-tarehy
El Ny fikarakarana volo dia fototra izay tsy maintsy raisintsika isan'andro. Tsy maintsy mampiasa vokatra tsara foana ianao fa afaka mampiasa ny sarontava volo tsara indraindray, satria amin'izany fomba izany dia hanampy fikarakarana fanampiny amin'ny volonay izahay. Amin'ity lohataona ity dia afaka manana volo mandavantaona sy tsara tarehy isika, mamirapiratra sy mahasalama raha mampiasa maska ​​izay mety amin'ny volontsika.
ny ny sarontava volo dia hanatsara ny volonao ary amin'ny fisafidianana ireo akora ilaina Azontsika atao ny mandray an-tsaina ireo izay mety indrindra amin'ny volon-dohantsika. Ny sarontava voajanahary azontsika atao ao an-trano dia tsara, satria mampiasa akora voajanahary isika ary miaraka amin'izay dia hikarakara ny volo amin'ny zavatra tsotra isika.
1 Sarontava volo
2 Sarontava volo ho an'ny volo maina
3 Saron-tava volon-menaka
4 Saron-tava ho an'ny volo tsara
5 Sarontava volo
6 Saron-tava ho an'ny volo miloko
El volo frizzy matetika manana ny olana ny fahamainana, ka ny zava-dehibe amin'ity tranga ity dia ny famelomana ny volo. Matetika ny zavokà no mpamatsy an'ity tranga ity. Ka tsy maintsy mahita avocado masaka azontsika atao mash mba hampiasaina amin'ny volo isika. Ity avokado ity dia azo afangaro amin'ny menaka oliva na amandy izay manalefaka be tokoa mba hialana amin'ny friz. Aorian'ny fampiharana ny saron-tava dia tsy maintsy manasa ny volo amin'ny shampoo tsara isika fa ho hitantsika ny fomba fanjavonan'ny frizz raha voadona tsara.
Sarontava volo ho an'ny volo maina
Mety ho volo maina koa tombony amin'ireo akora manome hydration lehibe. Ny menaka voanio mifangaro sy ny atody fotsy no tena mety. Mamono be ny menaka voanio ary maivana ny atody fotsy nefa manampy amin'ny fitazonana ny volo ho mando foana, ka farany voky ny volo ary tsy maina intsony.
Sarontava vita an-trano ho an'ny volo misy menaka mazàna mampiasa ranom-boasarimakirana foana, satria manana hery astringent avo. Azonao afangaro amin'ny fotsy atody ilay voasarimakirana, izay singa maivana manampy mavana. Amin'ny volo misy menaka dia tsy afaka mampiasa akora manome tavy bebe kokoa toy ny menaka oliva isika, nefa azo afangaro amin'ny yaourt mandrehitra nefa tsy matavy. Manaova sarontava ary avelao mandritra ny antsasak'adiny. Tokony hosasana matetika ny volo. Ny limon dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny famokarana tavy amin'ny mora.
Saron-tava ho an'ny volo tsara
ny frezy dia singa tonga lafatra ho an'ny volo izay tsy manana tanjaka. Ny sarontava ho an'ny volo madinidinika dia tokony hanome tanjaka sy habetsahana. Mampiasà frezy izay azo potehina mba hanaovana paty iray izay ampianay katsaka. Manampy ny volo ny voaroy ary manampy lafarinina ny lafarinina.
El volo maditra mety ho maina sy frizzy, satria ny zavatra rehetra dia misy ifandraisany amin'ny fibre izay mety manimba. Zava-dehibe ny mamelona sy manalefaka ny volonao amin'ny vokatra izay manampy azy ho tsara kokoa. Mba hamirapiratan'ny volo dia tsy maintsy ampiana yolk atody amin'ilay sarontava isika. Ny atody dia manampy amin'ny fahazavana be ao amin'ny volo. Etsy ankilany, azontsika atao ny mampifangaro ny atody atody amin'ny yaourt, satria tena mahasalama ny yaorta ny volo ary manampy azy hitazona hydration. Ho fanampin'izany, izy ireo dia singa roa izay mora hita ao an-dakozia ary mifangaro mora foana amin'ny volony.
Saron-tava ho an'ny volo miloko
Ny volo mandoko dia manana olana lehibe satria maina izy ary indraindray simba. ny menaka oliva dia singa lehibe iray ary koa ny akora voajanahary dia tsy mirona hisarika ny loko. Azonao atao ny manisy tamenak'atody hamelomana ny volo ary hamirapiratra kokoa sy malama kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Sarontava volo 6 ho an'ity lohataona ity